Bishnu Rimal's Website » Blog Archive » कांग्रेसले छाडे माओवादी र माधव नेपालको पार्टी घरको न घाटको हुनेछन्
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। सबै दलहरु आआफ्नो तयारीमा छन्। उता निर्वाचन आयोगले पनि यसको तयारी तीव्र बनाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेले पनि आफ्नो तयारी गरिरहेको छ। यस पटकको निर्वाचनमा एमाले के गर्दैछ ? कसरी चुनावमा जान्छ? तालमेलको सम्भावना कति छ ? लगायतका विविध प्रश्नहरु आम नागरिकले चासोका रुपमा लिएका छन् ।
यस विषयमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले बाम गठबन्धनको हल्ला प्रचण्डले देउवालाई धम्क्याउने कार्ड मात्रै भएको बताएका छन् । रिमालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाम गठबन्धन सम्भव नभएको बताएका हुन् । उनले आगामी निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको अस्तित्व सकिने पनि दाबी गरे ।
रिमालले एमाले अलोकप्रिय रहेछ भने जनताले दण्डित गर्ने र यसमा एमालेको कुनै गुनासो नरहने पनि बताए । नेपालमा एमाले मात्र सच्चा राजनीतिक पार्टी रहेको र चुनावमा एक्लै जान सक्ने क्षमता राख्ने दल भएको उनको भनाइ थियो । अरु दलले जनाधार गुमाइसकेकाले अबको चुनावमा एमाले र कांग्रेसबीच मात्र प्रतिश्पर्धा हुने उनको दाबी छ। यसपटक केन्द्रबिन्दु संवादमा हामीले नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग कुराकानी गरेका छौं । हेरौं यो भिडियोमा:
कांग्रेसले छाडे माओवादी र नेकपा एस घरको न घाटको हुन्छन् : विष्णु रिमाल (एमाले उपमहासचिव)
::केन्द्रबिन्दु संवाददाता १५ चैत २०७८ ::